गुड फ्राईडे - साप्ताहिक
साप्ताहिक संवाददाता , असार २३, २०७४
पुरानो बानेश्वर क्षेत्रमा पनि राम्रा अनि शान्त रेस्टुराँ तथा बारहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । हालै बानेश्वर हाइटमा सञ्चालनमा आएको मोजो बुटिक होटल त्यसकै एउटा उदाहरण हो । पुरा पढ्नुहोस्
शनिबार दिउँसो डान्स पार्टी पुगेर नाच्ने रहर छ भने भोलि शनिबार आयोजना हुने ‘डान्स इन डार्क’मा सहभागी हुन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
हाम्रो दोहोरी साँझमा ७ बजेदेखि राति ११ बजेसम्म दोहोरी गीतको मज्जा लिन सकिन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
भोलि शनिबार हाइकिङ जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? काठमाडौंबाट केही घण्टाको दूरीमा पुग्न सकिने काभ्रेको बतासे डाँडा, नमोबुद्ध, बल्थली, खोपासिसम्म ‘हाइक फर नेपाल’ ले हाइकिङको आयोजना गर्दैछ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १९, २०७४
नेपाली सर्कस टोली सर्कस काठमाडौंले आज शुक्रबार फन्ड राइजिङ इभेन्ट गर्दैछ । विभिन्न किसिमका एक्रोब्याट्स प्रस्तुत गर्ने सर्कस काठमाडौंको शो हेर्न सपरिवार जाने हो कि ? पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ १२, २०७४
फ्रेज ब्यान्ड लाइभस्थान : मर्करी लाउञ्ज, पकनाजोल, क्षेत्रपाटीसमय : साँझ ७ बजे पुरा पढ्नुहोस्
अंग्रेजी महिनाको अन्तिम शुक्रबार हुने सांगीतिक कार्यक्रम पलेंटीमा यो महिना युवापुस्ताका गायक विधान श्रेष्ठ प्रस्तुत हुने भएका छन् । लामो अन्तरालपछि पलेँटीले पुन: आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन थालेको छ । पुरा पढ्नुहोस्
संसारभरको रेस्टुराँ, बार, लाउञ्ज, होटल तथा रिसोर्टहरूलाई नियालीरहने तथा तिनका जानकारी समेट्ने ट्रिप एड्भाइजरले ठमेलका यी बारलाई आफ्नो साइटमा समेटेको छ, जहाँ अन्तराष्ट्रिय स्तरको मदिराको स्वाद र सेवा प्राप्त हुने ट्रिप एड्भाइजरले उल्लेख गरेको छ : पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख २२, २०७४
केही महिनाअघि मात्र सञ्चालनमा आएको ‘डाइनिङ पार्क रेस्टुराँ एन्ड लाउञ्ज बार’ले हरेक विकेन्डमा बारबिक्यु पार्टी गर्न थालेको छ । शुक्रबार हुने उक्त बारविक्यु पार्टीमा मटन, चिकेन तथा फिसका विभिन्न प्रकारका बारविक्युको स्वाद लिँदै अन्य परिकारहरू पनि चाख्न पाइन्छ । पुरा पढ्नुहोस्
रसियन लेडी डिजे कातुशा स्पोबोडाले आज शुक्रबार काठमाडौंका पार्टीप्रेमीहरूलाई मध्यरातसम्म नचाउने छिन् । रसिया र चीनमा यी डिजेले आफ्ना गीत तथा अन्य संगीत मिक्स गरेर विभिन्न पार्टी सञ्चालन गर्दै आएकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख १५, २०७४
साथीहरू भेट्ने थलोका रूपमा परिभाषित गरिएको अमिगो क्याफे एन्ड लाउञ्जको आज शुक्रबार विशेष कार्यक्रमसहित ग्य्रान्ड ओपनिङ गरिँदैछ । पुरा पढ्नुहोस्
युजिकल अफेयर @ मुडस्
चर्चित कलाकारहरूले आज साँझ थापाथलीको ब्लूबर्ड मलस्थित मुडस् लाउञ्जमा लाइभ प्रस्तुति दिँदैछन् । पुरा पढ्नुहोस्
गेस्ट्रो रनवे एउटा ग्य्रान्ड फेसन तथा म्युजिक इभेन्ट हो । वर्ष ०७३ को अन्तिम साँझ अर्थात् चैत ३१ गते आयोजना हुने यो इभेन्टमा नेपालका चर्चित मोडल, सेलिब्रेटी तथा संगीतकर्मीहरूसँग नयाँ वर्ष मनाउन सकिनेछ । पुरा पढ्नुहोस्